MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 18 April 2010
ABMA Journal (Vol. 1, No. 6)
ABMA Journal Volume 1 No 6
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 21.4.100COMMENTS
Than Shwe News (18, April, 2010)
သန်းရွှေ သတင်းများ (၁၈၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
ကျောက်ဆည်မြို့၊ ညောင်ခြောက်ပင်ရပ်ရှိ ရေနား ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း မီးလောင်ခဲ့သော ကျောင်းအား ပြုပြင်မွမ်းမံဖွင့် ပွဲအား နံနက်ပိုင်းတွင် သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် ဟတ်စကီး (၂) စီးဖြင့်လာရောက် ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သန်းရွှေ ကျောက်ဆည်ရောက်နေသခိုက် ကျောက်ဆည်မြို့ဝန်းကျင်ရှိ ကြိုးဖုန်းများ၊ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ၊ အင်တာနက်ဆိုင်များ ပိတ်ထားခံရကြောင်းလည်း သိရသည်။
သန်းရွှေသည် ကျောက်ဆည်မှအပြန်တွင် ပြင်ဦးလွင်(မေမြို့)၌ ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံဦးမည်ဟုလည်း သိရသည်။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.4.100COMMENTS
Statement by NCUM (18.4.2010)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.4.10 1 COMMENTS
Labels: Bombs, Election, OTHERS' WRITINGS